Ko yanga yakaipei? Vakomana hwaga raive nemaskiri iri. Ndakabatwa zvese izvi,kusanganisira mboro, machende, mhata. Iniwo ndakaribata wena makongo ese aya kusvika ratota serakange ranaiwa. Rakaimba manhanga kutapira kuseri nekuseri iko kakotsi kachiti papata.
Pandakazoisa Muzvambarara waMr. Mboro mu zi drum remheche hure rakakuma fanika mombe. Ndakariisa like ndakange ndabatwa nedhimoni kutokakanganwa kuti kunombopfekwa kondomu asikana. Ndakatambirira zvandakange ndisati ndamboita negero rangu, hure rikachemerera fanika mbudzi kusvika rabowa. Masitaera atakarova ka he, kuti Dog style, bench style, windmill tiripo pachimubhedha chechichovha chairira fanika engine ye peugeot 404 yasakara. Ha mheche ndakainzwa kunaka musi uyu. Kutapira chaiko.
PREVIOUS POST Previous post: Wadiwa Sekuru, ndaita dambudziko nenyaya yekukara beche
NEXT POST Next post: Kusvira mukadzi wemunhu nyoro mutoilet yepashebeen